महिलाले घरको काम गरेनन् भने के होला ? - GalaxyPati
२०७८ जेष्ठ ११, मंगलवार २१:१४
उसै पनि घरको काम सहज छैन। बच्चालाई समयमा खुवाउने, स्कुल पठाउने मात्र होइन, जेष्ठ सदस्यलाई औषधि दिनेसमेत एउटा निश्चित समय हुन्छ। त्यसमा तल–माथि पर्नु पटक्कै हुँदैन। घरका कोठाभान्सा सफा गर्नु, आँगनछत सिनित्त पार्नु, लुगा धुनु, पाहुना खुसी पार्नु…अझै थुप्रै छन् जिम्मेवारी गृहिणी महिलाका!
तपाईको दिन आज कस्तो रहने छ !